इन्बक्समा न’ग्न तस्वीर माग्ने युवकलाई यी युवतीले यो जे गरिन् त्यो अहिले सर्बत्र भाईरल « गोर्खाली खबर डटकम
इन्बक्समा न’ग्न तस्वीर माग्ने युवकलाई यी युवतीले यो जे गरिन् त्यो अहिले सर्बत्र भाईरल
काठमाडौं । नेपाल मात्रै नभई विश्वभर अहिले विज्ञान, प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ‘शो बु’ब्स । सेन्ड न्यू’ड्स । गिभ से’क्स ।’ यी केही म्यासेज जो हरेक जसो महिलाहरुले प्राप्त गर्ने गर्छन ।
यो कति अचम्मको छ नि ? एकपटक सोच्नुहोस् त तपाईंले कसैलाई भेट्नुहुन्छ, हालखबर नसोधिकनै आफ्नो न’ग्न तस्बिर देखाउ भन्दा कस्तो हुन्छ ? मानिसहरु आमनेसामने हुँदा सायद यस्तो कसैमाथि पनि भएको छैन होला । तर मानिसहरुले सोसल मिडियामा त सबै चल्छ भनेर यस्तो हर्कत गर्ने गर्छन ।
यस्ता घटनाहरु समयसमयमा बाहिर आउँने गर्छन । यस्तै एक घटना बाहिर आएको छ । ट्वीटरमा एक महिलाले केही स्क्रिनसट सेयर गरिन् । त्यो स्क्रिनसट सोसल मिडियामा उनको र एक व्यक्तिबीच भएको कुराकानी देखाइएको छ ।
अब यो ट्वीट भाइरल चाँही किन भइरहेको छ ? यसको विशेष कारण छ । ति महिलाको नाम हो ल्याशा१३ हो । लामो समयदेखि एक व्यक्ति उनीसँग कुरा गर्न खोजिरहेका थिए ।
महिलाले उनीसँग कुरा गरिन् । कुरा सुरु भएको केही क्षणमा नै ती व्यक्तिको उद्देश्य के थियो त्यो स्पष्ट भयो । निकै कम समयमा उनले ती महिलासँग अचम्मको माग राखे । ति युवकले उनका न’ग्न तस्बिर पठाउन अनुरोध गर्न भ्याए । साथै उनले अर्को एउटा प्रस्ताव पनि राखे । तस्बिर पठाए बापत् उनी महिलालाई ३० पाउन्ड दिन तयार थिए । नेपाली रुपैयाँ चार हजार भन्दा बढी हुन्छ ।
महिलाले उनलाई पाठ सिकाउने सोचसहित पैसा पठाउन भनिन् । निक नामका ती व्यक्तिले पैसा पनि पठाइदिए । त्यसपछि उनले जे गरिन् त्यो निकै रोचक छ । उनले ती पैसाले आफ्नो लागि एउटा चीनियाँ खाजा सेट मगाइन् । फ्रेन्च फ्राइज, चाउचाउलगायत मगाइन् । त्यसपछि उनले लोभलाग्दो खाजाको एउटा तस्बिर खिचिन् र उनलाई पठाइदिइन् । ट्वीटरमा मानिसहरु उनको निकै तारिफ गरिरहेका छन् । एजेन्सी